Filtrer les éléments par date : jeudi, 27 février 2020
jeudi, 27 février 2020 22:43
Kitra: Tena mbola liana amin’i Arnaud ny klioban’ny Grenoble (Frantsa)
Nanamafy i Hakim Aibeche, mpanazatran'ny Grenoble B any Frantsa, fa tena mbola liana amin'i Arnaud Randrianantenaina izy ireo.
Nambaran’ity mpanazatra ity fa mila lohalaharana mahavita mamono baolina 15 ka hatramin’ny 20 isa mandritran'ny taom-pilalaovana iray ny klioba, ka izany no anisany mahasarika azy ireo amin’i Arnaud.
Nampiakatra ny lentan’ny fahaizan’i Arnaud ny fandraisany anjara tamin’ny « Coupe Arabe U20 » tany Ryad Arabia Saodita, na dia tsy nandingana ny fifanintsanam-bondrona aza ny Barea U20.
Nitohy tao amin’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny fivoriana nifanankalozana ho fijerena vahaolana hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon’ireo ministera izay niarahan’ny Praiminisitra, Ntsay Christian sy ireo tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ity sampandraharaham-panjakana izay tarihin’ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ity.
Noresahana nandritra izao dinik’asa izao ny fanatsarana ny kalitaon’ny fitsaboana amin’ny ankapobeny fa indrindra ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa mba hifanaraka amin’ny filàn’ny vahoaka.
Fonkotany miisa dimy eto Morondava no dibo-drano tanteraka dia Ampasy, Ankisirasira, Tanambao, Andakabe ary Morondava Centre tao aorian’ny nandalovan’ny andro ratsy izay nitondra rotsak’orana be teto amin’ny Faritra Menabe, izay nitarika fiakaran’ny reniranon’ny Kabatomena, ka vaky ary nitambatra tamin’ny fiakaran’ny ranomasina ka nitarika tondran-drano teto Morondava ny fiandohan’ity herinandro ity. Nisy ny rava trano, tafakatra 2 205 traboina sy tsy manan-kialofana, avy amina fianakaviana miisa 441.
Nidina, nijery ny zava-misy sy nankahery ny traboina ny solontenam-panjakana izay notarihin’ny Minisitrin’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, sy ny Minisitrin’ny Mponina, ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny vehivavy ary ny Minisitrin’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena, androany alakamisy 27 febroary 2020.
jeudi, 27 février 2020 21:13
Coronavirus: Teratany Malagasy iray navotana tany Wuhan ary ho atokan-toerana any India
Nanao fampitam-baovao ny ministeran’ny raharaham-bahiny malagasy androany tolakandro milaza fa « nahazo alàlana ny governemanta indiana, hanatanteraka sidina anabakabaka ny fiaramanidin’ny Tafika anabakabaka indiana (IAF) hitaterana fanafody any Wuhan, faritra foiben'ny coronavirus any Chine, taorian'ny fifampiresahana avo lenta niarahana tamin'ny governemanta sinoa ».
jeudi, 27 février 2020 20:55
Tolagnaro: Vary lo sy efa simba 150 gony nodorana
Nanao fitsirihana tampoka teny anivon’ireo magazay fitehirizana vary teto Tolagnaro ny ekipa avy ao amin’ny Faritra Anosy sy ny sampandraharaham-paritry ny indostria,ny varotra ary ny asa tanana, omaly, ka nahatratra vary lo sy efa simba miisa 150 gony tao amin’ny Magazay iray. Nogiazana avy hatrany ary nodorana teo anatrehan’ny manampahefana ireo vary ireo androany.
Hitohy amin’ny Distrikan’i Betroka sy Amboasary Atsimo ny fanaraha-maso ny vidin’entana sy ireo entana amidy eny amin’ny magazay hiarovana ny fahasalamam-bahoaka, araka ny toromarika nomen’ny Governoran’ny Faritra Anôsy, Jerry Hatrefindrazana. Hentitra ny fanaraha-maso ary tsy azo ekena ny fanararaotana sy ny fanambakana ny mpanjifa momba ireo entana ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro, hoy ity farany.
Coronavirus, io no mameno ny vaovao manerantany. Voakasika avokoa na ny sehatra sosialy, na toekarena, na politika, eny hatrany amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena sy ny finoana.
Manoloana ny fihombon’ny coronavirus dia nanapa-kevitra ny governemanta japoney androany alakamisy 27 febroary 2020 fa mikatona vonjimaika avokoa aloha ny sekoly, hisorohana ny fiparitahan’ity valanaretina ity, araka ny nambaran’ny praiminisitra Shinzo Abe.
Any Italia indray, dia mpilalao baolina kitra matihanina iray, 22 taona, milalao ao amin’ny klioban’ny US Pianese (Serie C) no voamarina fa voan’ny Coronavirus.
jeudi, 27 février 2020 20:39
La Possession: Malagasy ny iray amin’ireo kandida Ben’ny tanàna
Miisa folo ireo kandida amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna atsy amin’ny Kaominina La Possession atsy amin’ny Nosy La Réunion. Manana fihaviana malagasy ny iray amin’ireo mpifaninana ireo dia i Stéphane Randrianarivelo. Kandida narotsaky ny LREM (La République en Marche) antoko naorin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron ity farany.
jeudi, 27 février 2020 16:20
Fianarantsoa: Tsiaro ny hetsi-bahoaka ny 27 febroary 2009
27 Febroary 2009 - 27 Febroary 2020. Nisy diabe teto Fianarantsoa androany maraina, niainga teo Ambatomena ary nihazo ny Kianjan’ny Fahamarinana eo Ampasambazaha, ho fahatsiarovana ireo namoy ny ainy tamin’ny hetsi-bahoaka teto Fianarantsoa ny 27 febroary 2009.
Nitarika izany ireo Raiamandreny mpitari-tolona tamin’izany fotoana izany sy ireo solontena ara-panjakana eto an-toerana. Nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin’ny tsangambaton’ny maherifo ao anoloan’ny Magro Ampasambazaha ho marik’izany.
(Loharanom-baovao: Goverinoran'ny Faritra Mahatsiatra Ambony)
jeudi, 27 février 2020 13:54
Complexe sportif Ampisikina Mahajanga: ONG Tafita any Antananarivo no mitantana azy
Manomboka mampiaka-peo ny tanora eto Mahajanga, satria narodana ny Gymnase fanaovana fanatanjahan-tena, hananganana vaovao, nefa ny asa hatreto tsy misy miainga.
Ilay Complexe sportif etsy Ampasikina anefa dia andoavam-bola, ka 30 000ariary ny manao basket mandritra ny 1ora. Ary mbola ONG Tafita any Antananarivo no miandraikitra izany.
Ity Complexe sportif ity moa hatrany ampiandohana dia efa nisy olana, satria tao anatin'ny herin'andro monja dia niova anarana in-telo izy tamin'ny volana janoary 2016. Tamin'ny voalohany dia "Gymnase Municipal de Mahajanga" ny soratra teo, dia nosoloina "Gymnase olympique de Mahajanga" niaraka tamin'ireo famatarana anneaux olympiques, izay misy fepetra ny fampiasana azy ireny, dia niova indray ho "Complexe sportif de Mahajanga", ary nafenina tao ambadiky ny sainam-pirenena ireo anneaux olympique ireo rehefa natao ny fitokanana azy.
jeudi, 27 février 2020 13:48
Alakamisy Ambohimaha (RN7): Fiara may kila hotohoto
Nirehitra an-dalana ilay fiara, tsy nisy azo navotana fa may kila hotohoto. Androany marainan’ity alakamisy 27 febroary 2020 ity no niseho ny loza, kilaometatra vitsy ao atsimon’ny tanàna Alakamisy Ambohimaha amin’ny lalam-pirenena faha-7.